Waa maxay SEO, siduusa u dhisaa guusha Online-ka Ah? | Suubbis Blog
SEO waxaa laga soo gaabiyay Search Engine Optimization, waa hab farsamo oo la isticmaalo si loo beegsado, laguna soo jiito dhaqdhaqaaq badan boggaaga/website kaaga si dabiici ah.
Guusha laga gaaro internetka ma ahan mid si degdeg ah loo gaaro, waa mid u baahan in waqti dheer laga fikiro, dadaalna lagu bixiyo si loo gaaro guushaas. Tani waxaa sabab u ah waxaa jira madal badan oo aan isticmaali karno, sida matoorrada wax baara sida Google, baraha bulshada, website-yo iyo kuwo kale oo badan. Si guul loo gaaro guusha internetka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha soo socda
Inaad ka dhexmuuqatid matoorada wax baara sida Google
Inaad si wax ku ool ah ugu badashid dhaqdhaqaqaaga gacasiga si Online ah, oo aad utayeeysid macaamiishaada ama soo booqdayaashaada Online-ka
Inaad dhistid joogitaan internetka oo adiga kuu gaar ah
Inaad u fududeysid sidi ay kuu heli lahaayeen dadka kugu xeran iyo inaad u diyaarisid qaabab kala duwan oo ay kuugu soo gaari karaan
Inaad garasho ulahaato dadka internetka kaaga xiran
Inaad ogaal u yeelatid suuqaaga
Inaad la socotid dadka ama ganacsiyada uu tartanka kaala dhexeeyo
Inaad dhistid qiimo iyo mug dhanka onlineka ah
Inaad markasta gaartid macaamiisha kaaga xiran online-ka
Inaad macaamiisha online-ka ah u dhistid kalsooni ay kuugu qabaan
Inaad ku dadaashid inaad ka muuqatid internet-ka iyo inaad ku caanbaxdid waxa aad qabatid
Sidee buu SEO u caawin karaa guushaada Online-ka ah?
SEO wuxuu kaa caawinayaa sidi aad uga guul gaari laheyd dhammaan qodobada aan kor kusoo xusnay uu ganacsigaaga ama fikirkaaga u baahan yahay. Waxuu kaa caawinayaa sidi aad uga dhexmuuqan laheyd matoorrada wax baara sida Google, Yahoo, Bing, Baidu iwm.
SEO wuxuu kuu fududeynayaa sidi aad uga faa’ideysan laheyd awoodaha aaladaha wax baara, iyo inaad tira badan oo wax baara ugusoo weecin laheyd bartaada internetka.
Sababta uu SEO u yahay mid wanaagsan ayaa ah 5 siyaabood uu ganacsigaaga u guran lahaa faa’idada matoorada waxbaara. SEO waa hab si fiican loo qeexay, waana habka horseeda faa’idoyinka ay kamid yihiin:
Inaad kasoo muuqatid saaxadda aadka u weyn ee onlineka
Arinta ugu horeysa uu SEO dhisaayo ayaa ah isku xirka boggaaga iyo baraha wax laga raadiyo, waxaa jira nidaam dheer oo la raaco si loo hubiyo tillaabadaan, laakin mar hadii ay tillaabadaan billaabato waxaa internetka kasoo muuqanaya dhammaan macluumaadka, adeegyada iyo alaabaha aad gaddid. Hadii aad kor uqaadid howshaan waxay dadka wax raadiya heli karaan dhammaan xogta kujirta website kaaga
Inaad aqoon uyeelatid macaamiishaada
Inaad cilmi baarid ku sameysid ereyada ay dadka baaraan ayaa ah waddada ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo. Tani waa tillaabada lagu beegsado dadka wax raadiya, waana mid aad ugu badali karitid macaamiishaada. Ereyada ayaa ah waxa dadka ay inta badan ku qoraan matoorada wax raadiya marka ay doonayaan iney macluumaad ama alaabo baaraan. Mar hadii aad aqoon u leedahay ereyadaan waxaad aqoon u leedahay macaamiishaada, sida waxa ay baarayaan, sida ay u baaraan iyo waxa ay dooonayaan. Arrintaan waa mid muhiimad weyn u leh dadka raba iney bartilmaameed kadhigtaan dadka wax baara kedibna ay ugu soo leexiyaan bartooda internetka.
Inaad si fudud u gaartid macaamiishaada
Ereyada ayaa ah waxa isku xira websiteka iyo matoorrada wax raadiya sida Google, kedibna Google waxey kugu xireysaa macaamiishaada. Marka aad bilowdid adeegsiga ereyada ku haboon ganacsigaaga, fikirkaaga ama adeeggaaga, waxaa kugu soo xirmaya macaamiisha u baahan waxa aad ku hawlan tahay. Waxaa jira dad badan oo noqon kara macaamiishaada oo isticmaala internetka, waxaase laga yaabaa iney qaabab kala duwan wax uraadiyaan. Nidaamka SEO wuxuu kaa caawinayaa sidi aad dhammaantood uwada gaarsiin laheyd soo jiidashadaada.
Inaad dhaqdhaaq usoo jiidid website kaaga
Marka SEO lasoo koobo wuxuu ka shaqeeyaa sidi aad kusoo jiidan laheyd dhaqdhaqaaq dabiici ah oo laga dareemo boggaaga. Tani waa ujeeddada ugu weyn ee SEO-ga uu usameynaayo boggaaga. SEO waa nooc suuqgeyn soo gelin ah, oo muhiimaddiisu ay tahay sidi dhaqdhaqaaqa loogu horseedi lahaa website kaaga. Waa habka ugu muhiimsan ee dad loo soo jiito, sababtoo ah qof kasta wuxuu internetka ka baaraa waxa uu rabo inuu iibsado, kahor inta uusan dhiibin wax lacag ah.
Inaad dadka soo booqdo bartaada ubedeshid daneeyayaal
Tani waa mid kamid ah howlaha SEO uu qabto, booqasho badan oo lagu sameeyo bartaada waa mid faa’ido ballaaran u leh ganacsigaaga, waa mid kuu abuureysa fursado iyo hiigsi lagaari karo oo ay kamid tahay inaad lacag kasameysid xiriirrada aad online-ka ku sameysid.
Adeegsiga internetka wuxuu markasta kuugu kaabayaa sidi aad heer sare uga gaari laheyd dhanka onlineka.
Hadaba haddii aad u baahan tahay inaad ganacsigaaga ugu faa’ideyso nidaamka SEO. Suubbis ayaa diyaar kugula ah adeeggaan oo weliba si adiga kuu gaar ah laguugu sameynaayo si aad mar walba uga horeysid ganacsiyada uu tartanka kaala dhexeeyo. Si aad u heshid adeeggaan riix halkaan ama garaac lambarkaan. 0613778777